काठमाडौँ, भदौ १६–राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान निर्माणमा योगदान पुर्याएवापत भन्दै संविधानसभा पदकबाट विभूषित १ हजार १ सय ६ जना सभासद्को नाम गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयले पदक बितरण भएको तीन महिनापछि बल्ल पदक पाउनेको नाम राजपत्र माफृत सार्वजनिक गरेको हो । ती पदक गत १६ जेठमै बितरण भइसकेको छ । यसअघि मर्यादाक्रममा बिवाद भएपछि पुनः मर्यादा मिलाएर राजपत्रमा नाम सार्वजनिक गरिउको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संविधानसभा सदस्य निर्वाचन २०६४ र २०७० मा निर्वा्चित भएर संविधानसभा पदकबाट विभूषित हुनेको सूचीको पहिलो नम्वरमा विद्यादेवी भण्डारीको नाम छ भने पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको नाम चौथो नम्वरमा राखिएको छ ।
गृह मन्त्रालयले ९ भदौमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी संविधान सभा पदक पाउनेको नाम सार्वजनिक गरेको थियो । पदक पाउनेको सूचिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख कृष्णबहादुर महराको नाम क्रमश दोश्रो र तेश्रो नम्वरमा छ ।
पदक पाउनेमा उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवको नाम पाँचौं नम्वरमा छ भने पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द, स्वर्गीय सुर्यवहादुर थापा, स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ( प्रचण्ड), पूर्वप्रधानमन्त्रीत्रय झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराई, स्वर्गीय शुशील कोइरालाको नामावली क्रमश राखिएको छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको नाम १५ नम्वरमा छ भने मुख्यमन्त्रीहरु पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, शंकर पोखरेल, शेरधन राई, महेन्द्रबहादुर शाही र लालबाबु राउतको नाम २६ देखि ३० नम्वरमा राखिएको छ ।
पदक पाउनेका सूचिमा तत्कालिन संविधान सभा अध्यक्ष सुभाषचन्द्र नेम्वाङ र ओनसरी घर्ती मगरको नाम ३१ र ३२ नम्वरमा राखिएको छ । पूर्वउपप्रधानमन्त्री अमिक शेरचनको नाम ७७ नम्वरमा र पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा संविधान मस्यौदा समितिका संयोजक कृष्णप्रसाद सिटौलाको नाम २०२ नम्वरमा राखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको नाम ४६ नम्वरमा र महान्यायाधिवक्ता अग्नीप्रसाद खरेलको नाम ४७ नम्वरमा राखिएको छ ।
संविधान सभाको दुवै निर्वाचनमा निर्वा्चित सदस्यको संख्या ८७ छ । संविधानसभामा सदस्यको संख्या ६०१ भए पनि दोश्रो संविधानसभामा मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त गर्नु पर्ने चार पद खाली थियो ।
संविधानसभा सदस्य भए पनि धनुषा ४ बाट निर्वा्चित सभासद् संजय साहको नाम भने पदक पाउने सूचिमा राखिएको छैन । त्यस्तै स्वर्गीय रामकुमारी यादवको पनि नाम राखिएको छैन ।
साह फौजदारी अभियोगमा हाल जेलमा छन् । सर्वोच्च अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला भएका बालकृष्ण ढुंगेलको पनि पदक पाउनेमा नाम छैन । उनी पहिलो संबिधानसभामा ओखलढुंगाबाट निर्वा्चित भएका थिए । उनको फैसला कार्यान्वयन भइसकेको छ ।